political | Ushaft's Blog
nepal, political, rights
न्यायको लडाईँमा तपाईँको साथ
हिजो र आजका अपराध गर्नेहरुलाई कारवाही भएमात्र भोलीका अपराधीहरु दुरुत्साहित हुन्छन्। नेपालमा आफ्नै सत्ता नै आएपनि विश्वसमुदायले सजायँ दिइछाड्ने रहेछ भनेर उनीहरु डराउनेछन् र हामी सुरक्षित हुनेछौँ। अहिले न्यायको खोजि किन गर्नुपरेको हो भन्नेबारे मेरो विचार।
कर्नेण कुमार लामालाई अनुसन्धानको निम्ति विदेशमा हिरासतला लिनु र डेकेन्द्र थापा हत्याकाण्डको बारे नेपालमा छानविन चल्नु करिब एकै समयमा भएका घटना थिए। लामाको पक्राउले नेपाल राष्ट्र कमजोर भएको सन्देश दिन्छ, त्यसकारण त्यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मत थियो। अर्को मत यो पनि थियो कि मानवअधिकार अपराध बारे छानविन र कारवाहि नेपालले गर्दैन भने विदेशमै भएपनि हुनु राम्रै कुरा हो। म दुबै मतसँग सहमत छु। नेपालको कुटनीतिक प्रतिष्ठा र नेपाली नागरिकको सुरक्षाको बारे हामीले पीर गर्नुपर्छ। विदेशीले हाम्रो नागरिक पक्रियो भने त्यसको बारे उचित कदम चालेर उसको सुरक्षा गर्नु हाम्रै दायित्व हो। तर कानुन र र विधिको शाषण मान्ने देश हौँ र त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउन चाहेका हौँ भने मानवअधिकार हनन र युद्ध अपराध जस्ता गम्भिर मुद्दाको बारे हामीले बाकिँ विश्वलाई ढुक्क बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो हालत झन् खराब हुन्छ।
Maoists attempted to murder journalist TIka Bista even after the start of peace process (picture: Nepali TImes)
शान्ति प्रकिया शुरु भैसकेपछि पनि नेपालमा बोलेको र लेखेको भरमा धेरैले सजाँय भोग्नुपरेको छ। केहि वर्ष अघि रुकुमकी टिका विष्टलाई माओवादिले मरणाशन्न हुनेगरी आक्रमण गरेका थिए। शान्तिप्रकिया शुरु हुने बेला तिरै बारामा वीरेन्द्र साहको हत्या गरिएको थियो। उमा सिंहको हत्या अझै रहस्यमयी रहेको छ। जिल्लाहरुमा थुप्रै पत्रकार, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी र समाजकर्मीहरु प्रति आक्रमण भइरहेकै छन्। आजकल राजनीतिमा माओवादिको बन्दुक, पैसा र पाखुरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल बनेकोले र आफ्नै आधार र अडान गुम्दै गएकोले एमाले-काङ्ग्रेसहरुले पनि यस्तै हर्कत गर्न थालेका छन्। यद्दपी केन्द्रिय नेताहरुलाई दवाव दिएपछि उनीहरुले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि र विगतको कारणले कहिलेकाहिँ कार्यकर्ताहरुलाई त्यस्ता काम कम गर्न निर्देशन पनि दिने गरेका छन्। माओवादिका उपल्ला नेताहरु भने खुलेआम नै अझै धेरै बलिदान गराउन तयार रहेको, अरुलाई झम्टिनु परेको, खुट्टा भाँच्नु परेको आदि निर्देशन दिइरहन्छन् र हिंशा नै एकमात्र उपाय र सत्य रहेको स्विकार्छन्। त्यसकारण यस्तो स्थितीमा न्यायको खोजी, विधिको शाषण र लोकतान्त्रिक प्रकियाको विकास गर्न निकै अप्ठेरो हुँदै गइरहेको छ।
Dekendra Thapa,ajournalist murdered by Maoists during their war (picture: mikeldunham.blogs.com)
न्यायको खोजी किन चाहिएको हो? म आफ्नो व्यक्तिगत बिचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म जस्ता लेख्ने-बोल्ने मानिसहरुलाई र देशका सबै जनतालाई निरन्तर एउटा भय छ, कतिखेर के हुने हो। के बोलेको वा कार्य गरेको आधारमा कसको आक्रमणको तारो बन्नुपर्ने हो कसैलाई थाहा छैन। स्थानीय तह र गाउँटोलमा यो स्थिति झनै डरलाग्दो छ, किनकी त्यहाँ यस्तै मानिसहरुसँग दिनदिनै व्यवहार गर्दै बस्नुपर्ने वाध्यता छ र केहि परे सुरक्षा-कानुनको कुनै ग्यारेन्टि छैन।
विगत र हालका अपराध गर्नेहरुलाई कारवाहि भयो भने कम्तिमा म ढुक्कसँग लेख्न पाउँछु। त्यस्तो कारवाहिले अपराध गर्नेहरुलाई दुरुत्साहित गर्छ। भोली कसैलाई धम्कि दिनुअघि, कुनै भौतिक आक्रमण गर्नु अघि वा ज्यान लिनुअघि उनीहरुले धेरैपटक सोच्छन्। नेपालमा मेरै सरकार भएपनि विदेशमा समात्ने रहेछ, विदेशमा नसमातेपनि नेपालमै दवाव बढेर कारवाहि भइछाड्ने रहेछ भन्ने उनीहरुलाई थाहा हुन्छ। नेपालले कुनै पनि युद्ध अपराधीलाई कारवाहि नगर्ने हो भने नेपाल सहभागी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुबाट नेपाल बहिष्कृत हुन पनि सक्छ र नेपालका नागरिकहरुलाई घुमफिर गर्न कडाइ गरिन सक्छ। नेपाललाई सहयोग रोक्का गर्ने वा दवाव दिएर एक्लो बनाउने कार्यहरु हुनसक्छन्। त्यसपछि हामी भारत र चीनको शरणमा पर्नुपर्ने हुन्छ, र उनीहरुले समयोग गर्न राजी भएपनि कडा सर्तहरुको सामु सम्झौता गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि केको राष्ट्रियता, केको सार्वभौमिकता।
Nanda Prasad Adhikari and Ganga Maya have been fightingalong battle for justice (picture: blog.com.np)
त्यसकारण अहिले दोषिहरुलाई कारवाहि नगर्ने हो भने र कानुनी प्रकिया विना हस्तक्षेप अघि नबढाउने हो भने यो देशमा कोहि सुरक्षित छैन। मजस्ता अरु धेरैले नाम लुकाएरै लेखिरहनुपर्नेछ वा त्यसो गर्न पनि पाउने छैनन्। अहिले विभिन्न मानिसहरुले व्यक्तिगत तहमा गरिरहेको न्यायको लडाईँलाई साथ दिनुको हामीसँग विकल्प छैन। एकजनाले न्याय पाए अरुपनि उत्साहित भएर न्याय माग्न अघि बढ्नेछन्। नत्र अहिले न्याय माग्नेको बोली बन्द गरिदिने हो भने भोली कोहि पनि अगाडि आउने छैन र यो देशबाट न्याय र कानुन सदाको निम्ति समाप्त भयो भनेर बुझे हुन्छ। झन् चुनावको अगाडि यस्तो नजिर बसाउने हो भने चुनाव कस्तो होला, परिणाम कस्तो आउला र हामी सबैको भविष्य कस्तो होला?
यदि तपाईँलाई आफ्ननो स्वतन्त्रता प्यारो छ, आफ्नो अधिकार र कर्तव्य वहन गर्न मन छ, आफ्नो र सन्ततिको भविष्य र सुरक्षित बाँच्न पाउने हकको पीर छ भने तपाईँले कसको साथ दिनुपर्छ र कसका अतिवादको विरुद्ध अडान लिनुपर्छ, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले अपराधीहरुलाई कारवाहि हुने हो भने तपाईँमाथी अपराध गर्न भोलीका संभावित अपराधिले अनेक पटक सोच्नेछ र शायद अपराध गर्नबाट पछि हट्नेछन्। नभए तपाईँसम्म उनीहरुका डरलाग्दा हातहरु आइपुग्न कत्तिपनि समय लाग्नेछैन। हेर्दा हेर्दै त्यो हातले तपाईँ-हाम्रो घाटी निमोठ्ने छ, तर हाम्रो निम्ति बोल्न कोहि तयार हुनेछैन, हाम्रो बोली कसैले सुन्ने छैन।
A couple has been fightingalong battle for justice in Nepal. Their teenaged son was killed during armed conflict in Nepal, allegedly by the Maoist. The government jailed the couple when they asked for justice and later sent them toamental hospital. They’re fighting for their life now inaKathmandu hospital. Although police are investigating the case, Maoist leaders Baburam and Prachanda have openly threatened the government and civil society against any investigation. They repeated their threat again today, and warned that serious actions will be taken if the investigation is carried out. The government has remained silent and even failed to assureafair trail and independent legal process.
HRW: Nepal: Adhikari’s Parents Deserve Answers
HTW: Nepal: Truth & Reconciliation Law Betrays Victims
फुजेल घटनाको अनुसन्धान रोक्न दवाब
economy, nepal, political
बजेट आउनु अघि
के हालका वर्षहरुमा नेपालको गरीबी बढाउन सबैभन्दा जिम्मेवार “गरीबमुखी” भनेर चिनिन चाहनेहरु नै हैनन् र ?
November 2010: Maoist lawmakers roughing up Finance Minister Surendra Pandey as the latter prepares to present the budget for 2010/11 fiscal in the parliament. (Picture: THT ONLINE)
देशको वार्षिक बजेट आउनेवाला छ, तर राजनीतिक खिचातानीका बिच नआउन पनि सक्छ । वैधानिक सरकारले ल्याउन खोजेको बजेटकै दौरान संसदमै हानाहान गरेर अर्थमन्त्रिको हातबाट झोला खोस्ने चलन बसेको देशमा अधिकार विहीन बनिसकेको र वैधानिकता पनि गुमाउन लागिसकेको सरकारले ल्याएको बजेट उपर के कस्तो रडाँको मच्चिने हो, हेर्न त बाकिँ नै छ । यो लेखको विषय भने बजेटलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेको एक पक्षसँग मात्र सम्बन्धित छ । नेपालमा बजेट आएपछि सबैतिर हुने चर्चा प्राय राहतहरुका विषयमा हुन्छ: तलब कति बढ्यो, भत्ता कति थपियो, अनुदान बढ्यो कि बढेन, वितरण हुने रकम कति मोटो छ? तिनै विषयहरु उपर पत्रिकामा लेखहरु छापिएलान् र सो कै आधारमा कतिले बजेटको मुल्याङ्कन गर्लान् । त्यसमाथी गरीबमुखि भनेर चिनिन चाहने वर्तमान प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रि, उनीहरुको पार्टि आदिको समूहले ल्याउने बजेट झनै रोचक हुनेछ । यस विषयमा हामीले कस्तो तयारी गर्ने, बजेटलाई के आधारमा मुल्याङ्कन गर्ने ? यो लेखको विषय यहि हो ।
सन्दर्भ : बिसुनी सदाको घरमा बाबुराम भट्टराईको रात्रिभोज
प्रधानमन्त्रि बाबुराम भट्टराई निजी सम्पत्तिमा विश्वास गर्दैनन्। उनले आफ्नो पार्टिको नीति पनि यहि बनाएका छन। सक्दा हुन् त त्यसैलाई देशको नीति पनि बनाउँथे- संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था लेख्न खोजेका पनि हुन् र “माओवादि छापको संविधान नबने नस्विकार्ने” समेत बताएकै हुन् (त्यहि भएरै संविधान सभा विघठन गरेका हुन्)। यस्तो मा महोत्तरीका बिसुनी सदालाई प्रधानमन्त्रिको रात्रिभोज व्यवस्था गर्दा ऋण लागेको कुरालाई हामीहरु जसरी बुझ्छौँ, बाबुरामले त्यसरी बुझ्दैनन्। यस समस्याको बाबुरामीय समाधान हो: ऋण दिने मान्छेलाई जबरजस्ति सो ऋण मिनाह गर्न लगाउनु, नमाने आफ्ना पार्टिका लठैतहरु लगाएर बाध्य पार्नु। उनी सबै सम्पत्ति राज्यको हुने अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्छन्। त्यस्तोमा उनले सदाको घरमा गएर खाएको पनि राज्यकै श्रोत हो, नखाए पनि आखिर त्यो राज्यकै थियो। यसलाई उचालेर ठूलो कुरा बनाएको प्रधानमन्त्रिलाई पक्कै मनपर्ने छैन र मौका मिले उनी भन्नेछन्- “यो केहि सिमीत समूहको कुण्ठामात्र हो, यसको कुनै महत्व छैन। हामीलाई थाहा छ कि जनता हामीलाई खाना खुवाउन एकदम खुशि छन् र अरु खुवाउन चाहन्छन्”।
PM Bhattarai with his team at the dinner (Picture: ekantipur.com)
प्रधानमन्त्रिले दलितको घरमा गएर खाना खानु राम्रो कुरा हो, यसले जातीय भेदभावको प्रथालाई दुरुत्साहन गर्छ। अझ उनले सार्वजनिक यातायत चढेरै गए हुन्थ्यो, त्यसो गर्दा बाटोमा मानिसहरुले दैनिक रुपमा भोग्ने समस्या र भेदभाव पनि थाहा लाग्थ्यो होला र केहि समाधान पनि निकाल्थे होला। यद्दपी यस्ता समस्याहरु समाधान गर्ने अरु धेरै राम्रा बाटोहरु होलान्, तर प्रधानमन्त्रिले खाना खानुलाई नै म त्यति ठूलो विषय बनाउनेवाला छैन। समस्या गएर खाना खानुमा छैन। समस्या प्रधानमन्त्रि स्वयंले गर्ने शोषण र भेदभावमा छ।
भट्टराई एकदमै पूर्वाग्रहि व्यक्ति भएको तथ्य अब कसैबाट लुकेको छैन। उनी लडाईँमा मरेका आफ्ना पार्टिका मानिस बाहेकलाई शहिद पनि मान्दैनन्। यो भन्दा अघि उनी खाना खान गएको पश्चिमको एउटा घरकी छोरीलाई सेनाले लगेर मारेको रहेछ। उनले माओवादीले लगेर मारेका मानिसहरुलाई साहनुभुती दिन कहिल्यै चाहेका छैनन्, बरु तीनका घाऊमा नुन छर्किन उनलाई मनपर्छ। त्यस्तै बीबीसी नेपाली सेवाको हिजोको रिपोर्टमा पनि “भट्टराई निकट मानिने भरत साहको फुलकहा गाउँमा राती बसेका प्रधानमन्त्रि” भनिएको छ। यसरी हेर्दा आफ्नो पार्टिका खड्गबहादुर विश्वकर्मा मोहन वैद्य खेमामा गएपछि त्यसको राजनीतिक क्षति न्युनिकरण गर्न यि भ्रमणहरुको प्रयोग गरेजस्तै देखिन्छ। त्यसलाई अनेक नाम दिएर “लोकप्रिय” बनाउन खोज्नु उनको चारित्रिक विशेषता नै हो, तर तीनलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै पत्याउनु पर्छ भन्ने पनि छैन।
अर्को भेदभाव उनले श्रमको सम्मान नगरेर गरेका छन्। होटेल-रेस्टुराँमा खाएको पैसा माओवादी बाहेक अरुले त तिर्नैपर्छ। अरुको घरमा खाँदा पैसा तिर्न नपरे पनि अरु शिष्टाचारीय नियमहरु हाम्रो संस्कारले स्थापना गरेका छन्। मैले देखेको नेपाली संस्कार अनुसार पनि कसैकोमा पाहुना लाग्दा केहि खानेकुरा कोशेली लिएर गइन्छ र आफुले पनि निम्तो दिएर फर्किइन्छ। चिनेजानेकालाई खानेकुराको पैसा दिँदा अपमान हुने हाम्रो चलन भएकोले यस्तो अप्रत्यक्ष रुपले तिर्ने व्यवस्था बसेको हुनुपर्छ। त्यसमाथी ५०-५० वटा गाडिका लस्कर लिएर खान गएपछि त “दु:ख भयो होला” भनेर काममा सघाइदिनु त अनिवार्य नै हो। हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्रि सबै नेपाली संस्कारहरु फ्याँकेर नयाँ संस्कार बसाउने अभियानमा लागेका मान्छे, उनलाई यीनको मतलब नहुँदो हो। तर किसानहरुको श्रमको पुरै अवमूल्यन गरेर प्रधानमन्त्रिले आफ्ना उपलब्धिहरुको सुचीमा “श्रमशोषक”को परिचय पनि थपेका छन्। यसरी कुनै निम्न आय भएको किसानको घरमा अबुझले झैँ दर्जनौँ मानिस बोकेर पाहुना लाग्नु, उनको समय र श्रमको कुनै महत्व नभएजस्तो गरी र आफैँले आर्जेको जस्तो गरी मजासँग खाना खाएपछि आफ्नो बाटो लाग्नु लज्जाविहिनताको राम्रो उधाहरण हो। उनले प्रचार-प्रसार लगायत आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरुका निम्ति यसरी निम्न आय भएका मानिसहरुको उपयोग र शोषण गरेर ती मानिसहरु र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको वर्गकै मजाक उडाँएका छन् ।
बाबुराम भट्टराईले यस्तो गर्नु नयाँ वा आश्चर्यजनक भने पक्कै होइन। उनले चलाएको युद्धको समयमा पनि उनका कार्यकर्ताहरुले गाउँमा जनतालाई दिनुसम्म दु:ख दिएको कुरा जगजाहेरै छ। मानिसहरुका भकारी लुटेको, खानामा “मासु-भात नै चाहिने” उर्दि दिएको र भनेजस्तो नभए खाना फ्याँकेर हिँडेका कुरा लेखक स्यंयले भरपर्दा भुक्तभोगीहरु र कहिलेकाँहि आफन्तैहरुबाट सुनेको हो। भट्टराईबाट ती भन्दा उपल्लो स्तरको व्यवहारको अपेक्षा गर्नेहरुको common sense मा प्रश्न गर्नु बरु बढि उचित हुनेछ ।